China Abakhiqizi bebhodi leMicroporous nabaphakeli |Amandla
I-thermal conductivity yebhodi le-microporous iphansi kunomoya onganyakazi, futhi ukusebenza kwe-thermal insulation izikhathi ezi-3 kuya kwezi-4 kunezinto zendabuko.Kuyimpahla efanelekile yokushisa okushisayo okushisayo.Ngenxa yokuthi iqukethe inani elikhulu lama-nano-scale micropores, inomphumela omuhle kakhulu wokufakwa kwe-thermal.
Iphaneli ye-vacuum insulation (ibhodi le-VIP) njengamanje iyindlela engcono kakhulu yokufaka iketanga elibandayo elinokushintshwa okuphansi kwe-thermal kanye nokufakwa okuhle nomphumela wokonga amandla.
Ngomphumela ofanayo wokufakelwa, ukusetshenziswa kwamaphaneli okufakwa kwe-vacuum (amaphaneli e-VIP) kungenza umkhiqizo ube mncane, noma wenze indawo etholakalayo yokufukamela ibe nkulu.endaweni efanayo yokufakelwa, ukusetshenziswa kwamaphaneli okufakwa kwe-vacuum (amaphaneli e-VIP) angenza i-incubator isebenze Kuthatha isikhathi eside.
Ku-insulation yeketanga elibandayo kanye nesicelo sokonga amandla, ibhodi lokufakwa kwe-vacuum alihlinzeki nje kuphela izinga lokusebenzisa isikhala somkhiqizo, kodwa futhi linemiphumela esobala yokushisa okushisayo kanye nezinzuzo zezomnotho zokonga amandla.
Kuyimpahla yokufakwa kwamaketanga ebandayo esezingeni eliphezulu futhi esebenzayo.
Izingxenye eziyinhloko zebhodi le-microporous yi-nano silicon dioxide ne-silicon carbide.Kuwuhlobo olusha lwezinto zokuvikela ukushisa ezitholakala ngemva kochungechunge lokusabela komzimba namakhemikhali, okuhlanganisa izinhlayiya ze-silicon dioxide ezinobubanzi bamashumi ama-nanometers, kanye nezikhilimu zelanga ze-infrared nemicu.
Ukusebenza kokushisa okushisayo kwebhodi le-microporous izikhathi ezingu-3-4 kunezinto zendabuko, ezinganciphisa kakhulu ukusetshenziswa kwamandla kwemishini futhi kunciphise ukushuba kwesendlalelo esidingekayo sokushisa okushisayo.
1. Ukushisa okuthile okuncane, isitoreji esiphansi sokushisa, nokumelana nokushaqeka okushisayo.Ukumelana nezinga lokushisa kufika ku-1100°C
2. Ingavimba ngempumelelo imisebe ye-infrared
3. I-thermal conductivity iyahluka kancane kakhulu ngokukhuphuka kwezinga lokushisa, okuyenza ibe into ekahle yokushisa ephezulu yokushisa.
4. Ngeke igaywe, futhi iyisisetshenziswa esingashi sebanga le-A1, esinokuzinza okuhle kokushisa, indawo yokugcina ukushisa encane, ukumelana nokushaqeka okushisayo, nempilo ende yesevisi.
5. Ayinabuthi futhi ayihambisani nemvelo, ayikho imicu eyingozi ehogelayo, ayikho intuthu futhi ayikho iphunga elingavamile lapho kushisa, ayinakulunywa lapho uthinta isikhumba, futhi ingasetshenziswa ezintweni zikagesi zasendlini.
6. Amathuluzi okusebenza ngokhuni angasetshenziselwa ukusika, ukubhoboza nokunye ukucubungula.
7. Kuyinto engashi futhi ingasetshenziswa njengesendlalelo esingashi nokushisa.
8. Ayinabuthi futhi ayihambisani nemvelo, ayikho imicu eyingozi ehogelayo, ayikho intuthu futhi ayikho iphunga elingavamile lapho kushisa, futhi akukho ukulunywa lapho uthinta isikhumba.
Ibhodi le-Microporous liwumthombo wokushisa oshisayo ophezulu osebenza kahle kakhulu, futhi lifanele izinhlelo zokusebenza ezinezidingo eziphezulu zokufakwa kwe-thermal nokonga amandla, noma izikhathi lapho ukujiya kwezinto ezishisayo kunqunyelwe.
Insimbi kanye nensimbi metallurgical imishini (ladle, tundish, torpedo);
Izithando ze-Ceramic (ama-roller kilns, ama-tunnel kilns);
Iziko lengilazi (izithando ezincibilikayo, izithando zomlilo, iziwashi);
Imboni ye-aluminium (isithando somlilo, isithando somlilo, i-ladle);
Imishini yamakhemikhali (isithando somlilo, ipayipi lokushisa eliphezulu);
Imikhiqizo kagesi (amabhokisi amnyama, ama-thermometers, izifudumezi zokugcina ezishisayo);
Iminyango yomlilo (iminyango yokumisa ikheshi, izingxenye zomlilo) nezinye izimboni.
Izakhiwo I-JC1050 BOD
Specification Temp.(℃) 1200
Isikhathi sokusebenza.(℃) 1050
Ukuminyana ngobuningi (kg/m3) 320-350
Amandla acindezelayo (MPa) 0.35
Okwedlule: Ipuleti le-Phloolite mica
Olandelayo: Isitini se-Fireclay Esilula
Ibhodi le-Calcium Silicate
I-Soluble Fiber Blanket